Company Profile - Mika Optoelectronic Co., Ltd
MIKA OPTOELECTRONIC CO., LTD
150 mumaruwa uye kumatunhu kusanganisira Europe, America, Oceania, Africa, Southeast Asia, kuMiddle East uye Japan
Kubva pakagadzwa kwedu muchiso MIKA akatungamirira, pamwe simba R & D chinzvimbo, nyanzvi hwokugadzira chikwata uye akapfuma Zvakaitika indasitiri, isu vomurova zvigadzirwa zvitsva mhiri vatengi 'tarisiro ose gore, izvo nguva dzose kutungamirira bhizimisi muitiro. With chikuru musika mugove China, redu yokutengesa Network kwave rakawedzerwa pamusoro 150 mumaruwa uye kumatunhu kusanganisira Europe, America, Oceania, Africa, Southeast Asia, kuMiddle East uye Japan. Nokuda kwedu kwakasiyana kugona uye nhamba vakabudirira chiedza muzvirongwa yose, tave kuwana kurumbidzwa-akakodzera mukurumbira uye vave nevakawanda kuzivikanwa vatengi muno uye munyika yose.
MIKA OPTOELECTRONIC CO., LTD rakavakwa Dec 2006, unyanzvi mu R & D, kugadzira kumusika mumunda akatungamirira chiedza zvinhu uye uchikudzwa sezvo National Hi-Tech Enterprise, Shenzhen Top-vakapiswa Enterprise uye China Advanced Enterprise mu Anobvumirana Labor Relations. We vakazvimiririra kugadzira kugadzira kwakaita zvigadzirwa kubvira High Power akatungamirira Street Light, High Power akatungamirira Tunnel Light, akatungamirira Corn Light, akatungamirira High Bay, yaitenukira Chiedza, akatungamirira Tube Chiedza kune vamwe akatungamirira mwenje, izvo vanokodzera kuti tive mumwe pakukura vagadziri, bhizimisi uye exporters ose zvakatungamirira chiedza uye rezuva zviedza panzvimbo China, uyewo kutungamirira anotipa mu simba-pakuponesa mhinduro.
We akatungamirira kuitwa vanopupurirwa ne ISO9001 Quality Management System uye ISO14001 Environmental Management System mu semiconductor chiedza indasitiri pamusoro China uye isu kwete chete kuronga kuti indasitiri zvaanoda akatungamirira Street Light, akatungamirira Corn Light, akatungamirira Tube Chiedza uye akatungamirira Mafashamo Light uye zvichingodaro asi chinhano drafting nemwero mamwe maindasitiri. yose Range yedu chiedza zvigadzirwa kunge with advertising kubva munyika, dzematunhu, matunhu neminisiparati masangano yakavimbika uye dzimwe dzinoti kusanganisira akatungamirira Street Light, akatungamirira Tunnel Light, akatungamirira Tube Chiedza uye akatungamirira Down Light kunge vanopupurirwa pamwe CCC, CQC, CE, RoHs, Ul , SABS, ETL uye PSE.
Quality Innovation Kuvimbika Service
Kuomerera kuita basa redu muuzivi 'yepamusoro, utsanzi, kuvimbika uye basa' uye rinosundwa kumusika uye vatengi 'kudiwa, tiri nguva dzose kukanganiswa pa kupa vatengi pamwe zvikuru, zvakatipoteredza-ushamwari, simba-okuponesa, yepamusoro zvinhu uye zvakanakisisa mabasa. Rinosundwa kuramba utsanzi uye kuvandudzika, tinosungirwa kuedza kuziva chinangwa chedu chepamusoro kuti "Chiedza chenyika".